Iparrot fish: ukwazi, inkathalo, ulwazi kunye neempawu | Ngeentlanzi
Uhlobo aluyeki ukumangalisa. Kwanele ngathi ukuba singene kwiindidi ezahlukeneyo zezidalwa zasendle ezibandakanyiweyo kuyo, ukuze sikwazi ukubona iziganeko, iindawo kunye nezidalwa ezizodwa. Le meko ithatha indawo enkulu ngakumbi ukuba sihamba siye elwandle naselwandle. Kukho ukuqeshwa kwezilwanyana okuninzi okubonakala ngathi kuphume kumdlalo bhanyabhanya wezobuxoki okanye eyona mifanekiso ilungileyo. Umzekelo ocacileyo woku endikuxelela ukuba yenye yezona ntlanzi zibalulekileyo, i IParrotfish.
Le ntlanzi yesikhwenene ibalasele ngezinto ezininzi. Kodwa, ngaphandle kwamathandabuzo, eyona nto ibalaseleyo ngabo ngumbala wabo omkhulu kunye nembonakalo yabo engafaniyo. Usenokuba uvile ngeparrotfish amaxesha amaninzi, okanye ngekhe. Kungenxa yoko le nto sinikezela eli nqaku kuwe ukuze wazi ngcono ukuba ukuyo yonke imiba yayo kwaye wazi izinto ezibangela umdla kunye neenkcukacha ezirhangqileyo.
1 Indawo yokuhlala
2 Iimpawu zeParrotfish
5 Iparrot yentlanzi emanzini
I-Parrotfish, eyaziwa kwezinye iindawo ngegama le isikhweneneNjengoninzi lweentlanzi ezineempawu ezifanayo, zinolwazelelo olukhulu lokwenza amanzi ashushu ukuba abe likhaya lawo. Ngokukodwa, kunjalo amanzi olwandlekazi lwaseIndiya nolwePasifiki apho inani elikhulu leentlobo zezinto eziphilayo zihlala khona. Nangona kunjalo, sifumana neparrotfish kwi uLwandlekazi lweAtlantic kunye noLwandle oluBomvu.
Njengokuba kuqhele ukwenzeka, iparrotfish iye yaqhelana nobomi kwiingqaqa zekorale, njengezinye iintlobo ezininzi zeentlanzi, kuba kukho ithuba elikhulu lokusinda apho kunakwenye indawo.
Njengoko besitshilo ekuqaleni, yintoni eyahlula i-parrotfish kwezinye kwaye iyenza ibonakale ziimpawu zomzimba kunye nokuziphatha. Kufuneka kuthethwe ukuba i-parrotfish ayilulo uhlobo olunye, kodwa ke zizinto eziphilayo ezineempawu ezifanayo.
Kuqikelelwa ukuba zingaphaya kumashumi alithoba eentlobo zeparrotfish, ezinobukhulu obahlukeneyo, iimilo kunye neethoni. Kodwa njengomgaqo oqhelekileyo, ziintlanzi ezinemizimba emikhulu kwaye emide, ejikeleze malunga neesentimitha ezingama-90, nangona kukho isihlandlo apho umntu othile ngaphezu kweemitha eziyi-1,2 ubude. Ngokumalunga nobunzima, zijikeleze iikhilogram. Kukho iindidi ezinobungakanani obuncinci kakhulu, onobude obungadluli iisentimitha ezili-15.
Izikali ezigubungela ngokuchanekileyo imizimba yazo bubutyebi bazo obukhulu. Xa besebancinci, ezi zikali zinombala okhanyayo, kwaye xa isilwanyana sifikelela ekuvuthweni, ithoni yaso iyatshintsha, iya isiba namandla kwaye, nangaphezulu, ifumana imibala eyahlukeneyo (Iiblues, iipepuli, imifuno kunye nepinki zixhaphake kakhulu). Olunye uphawu lweparrotfish ngamazinyo abo anamandla, abathi bawasebenzise ukuluma iziqwenga zekorale kunye nokwaphula oonokrwece.
Ekugqibeleni, imibala yayo eyahlukeneyo kunye naloo mlomo uqinileyo ugobile yinto ekhokelele ekubeni le ntlanzi ibonakale ifana nezikhwenene.
Iparrotfish ngokubanzi uhlaza, kwaye basekele ukutya kwabo kwi-algae abayiklwebayo bayayiqokelela kwiingqaqa zekorale. Nangona kukho amaxesha apho Zisebenza njengamarhamncwaUkubambisa iimollusk ezincinci kunye nezinto ezinobungakanani obukhulu kakhulu.
Ezi ntlanzi, xa zisitya i-algae kunye neekorale, ziyakwazi ukutyumza nokugaya iziqwenga zibe ngamaqhekeza amancinci kakhulu. Oku kukhokelela ekubeni inkunkuma yayo iveliswe emva kokuba ukwetyisa kulungele.. Njengomdla, kukho indawo kwiplanethi apho iparrotfish, ngenxa yomsebenzi wayo obalulekileyo wesondlo kunye nokwetyisa, idlula imveliso yesanti yalo naluphi na uhlobo lwenkqubo yendalo. Izazinzulu ziqikelela ukuba kukho parrotfish engaphezulu kwe-100 kilos yentlabathi eveliswa ngonyaka, phantse akukho nto!
Kwimiba yokuzala kwakhona, i-parrotfish ikhetheke kakhulu. Ziyenye yeentlanzi ezimbalwa ezibiziweyo hermaphrodites ezilandelelanayo. Ithetha ukuthini le nto? Ngokuya bekhula bayatshintsha isini sabo. Ekuzalweni kwabo, ngabasetyhini, kwaye kwinqanaba lokugqibela lobomi babo babelana ngesondo lendoda. Nangona oku akusiyo into eqhelekileyo kuyo yonke i-parrotfish, kuba kukho iintlobo ezenza utshintsho kwi-reverse, okanye ngokuchaseneyo, musa ukutshintsha isondo kunye nokugcina isondo sokuzalwa.
Iimazi zizalela inani elikhulu lamaqanda. Benza oku, kuba uninzi lwala maqanda aluphili, kodwa endaweni yoko lifakwa zezinye izilwanyana ngelixa lihamba emanzini. Bonke abanye, abathe banethamsanqa elingcono, bafikelela emingxunyeni yolwandle apho baphumla khona de baqandusele.
Iparrot yentlanzi emanzini
Njengoninzi lwentlanzi yetropiki, parrotfish yenye yezona zilwanyana zixabisekileyo ze-aquarium ngombala wazo kunye nobuhle bazo. Nangona kunjalo, akukho lula ukuba iintlanzi zigcinwe, kuba ubudlelwane babo namatye eekorale phantse buhambelana, oko kuthetha ukuba bafuna ukuba baphile kamnandi kwaye bonwabele impilo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » IParrotfish